Lianchuang Technology Group yakaita musangano wekubatana kwekota yechitatu | Lianchuang
Yemabhizimusi Mhepo Inotonhorera-Dutu Dutu
Mangwanani eOctober 13, Lianchuang Technology Group yakaita musangano wekubatana kwekota yechitatu ye2020 muLianchuang Academy. Sachigaro weboka Lai Banlai, Vatungamiriri veBoka Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, Sachigaro Mubatsiri Lai Dingquan nevamwe vatungamiriri, pamwe nevatungamiriri veboka rakasiyana Vatungamiriri vemadhipatimendi anoshanda, vatungamiriri vemakambani akasiyana maindasitiri, nhengo dzeEconomic Management Committee, uye vakuru vezvemari nevashandi vakapinda musangano uyu. Musangano uyu waive nasachigaro naChen Ye, Mutungamiri weGroup uye Mubatsiri waSachigaro.
Pamusangano, Liu Qinghui, Executive Deputy Deputy General weLiantek, Yao Li, Deputy General Manager weLianchuang Electric Appliance Industry Co., Ltd, Wen Hongjun, General Manager weXinliangtian, Xu Jin, General Manager weLianchuang Electromechanical, na Ning Chuanjiu , mutevedzeri mukuru maneja weLianchuang Sanming, zvichiteerana akaita mabasa emakota. mushumo webasa. Mutori wenhau wega wega akashandisa yakajeka uye inonzwisisika seti yedata, ine mifananidzo uye zvinyorwa kunyatsoongorora uye kujekesa pane yechitatu kota yekuongorora kuita, kupedzwa kwemabasa mashanu akakosha egore, nenzvimbo dzinojeka uye nerima mukota yechitatu, uye isa pamberi pekutanga chirongwa chechina chekuita. Shure kwaizvozvo, Chen Ye, director weboka uye mubatsiri wasachigaro, akazivisa zvinangwa zvikuru zvebhizimusi rebazi rega rega mu2021, akaronga chikamu chechina chevanhu chinoshanda chekambani imwe neimwe. Sachigaro Mubatsiri Lai Dingquan vakaita gadziriro dzakadzama uye gadziriro dzeGroup ra2021 rakazara basa rebhajeti.
Panguva yemusangano, Wei Weicong, mukuru wedhipatimendi reIT reboka iri, akataura nezvekuitwa kweruzivo rweboka neboka rega rega muna2020. Chen Jiandong, chipangamazano weIT wekunze weboka, akagovana zviitiko zvakanaka zvekuzivisa, uye akaronga nzira uye nzira dzekuvandudza manejimendi manejimendi nerubatsiro rwehurongwa hweruzivo Kutanga.
Sachigaro Lai Banlai akapa hurukuro yekupedzisa, achisimbisa nekukumbira basa rakabatana.
1. Ramba uchiita uye ubatanidze kuvaka ruzivo. Iri boka rakaisa mari inopfuura makumi maviri emamiriyoni euan kare uye shure. Makambani ese anofanirwa kushingairira kusimudzira manejimendi. Vanhu vese vanoshandisa masisitimu eruzivo, kubva padanho repamusoro kusvika kuvashandiwo zvavo, vanofanirwa kupa zvitupa zvemabasa; 2. Kambani yega yega Kuburikidza ne "matatu tafura dzekutengesa", isu tichanyatsoongorora mikana yemusika yedunhu rega rega uye chimwe nechimwe chigadzirwa, uye kumhanya kupedzisa zviratidzo zvebhizimusi zvegore; mukota yechitatu neyechina, kambani yega yega ichaita gadziriro yebhajeti ya2021 uye basa rakakosha revanhu. chechina, boka rakazivisa akati wandei maManagement manejimendi muindasitiri imwechete, munhu wese anofanirwa kuvhura pfungwa, kudzidza kubva kune mumwe, kudzidza kubva kune mumwe, kufambira mberi pamwe chete, kugadzirisa mashandiro ekambani uye purofiti, uye nekuvandudza mabhenefiti evashandi.
Mukupedzisira, Lai Dong akakurudzira munhu wese kuti: "Enda kumberi ufare." Kurudzira munhu wese kuti aite zvinhu zvakanyanyisa uye aite zvirinani, kuitira kuti vagowana yavo yega kukosha papuratifomu yeLianchuang uye vazive zviroto zvavo.
Parizvino, musangano wechitatu wekota wekubatana weLianchuang Technology Group wapedza zvinobudirira. Musangano uyu wakaronga mabasa akakosha echina yechina uye kujekesa hurongwa hwehurongwa uye zvinangwa zvebhizinesi zve2021. Kambani inoshandisa musangano uyu semukana wekuona zvakanakira, kutsiva zvikanganiso, uye kuita chaiyo nhamburiko yekumhanya kwechina yechina. Shingirira kurwisa 2020 yekuvhara mutambo uye nekuisa hwaro hwakasimba kutanga kwe2021!
Post nguva: Oct-16-2020